Fanafihana taminny 13 Novambra 2015 tao Île-de-France
Katôlisisma ao Gabôna
Silamo ao Gabôna
Fiteny ao amin ny Repoblikan i Kôngô
Mamadou Aliou Kéïta
Bodisma ao Indônezia
Hindoisma ao Indônezia
Vanimpotoana hindo sy bodista tao Indônezia
Fiangonana ortodoksa siriaka
Hôsea (mpanjakani Israely)
Jorama (mpanjakani Israely)
Joasy (mpanjakani Israely)
Ahazia (mpanjakani Israely)
Ela (mpanjakani Israely)
Saloma (mpanjakani Israely)
Mpitsara ao aminny Baiboly
Joahaza (mpanjakani Israely)
Zakaria (mpanjakani Israely)
Peka (mpanjakani Israely)
Tany avoni Golàna
Dionisiosy avy any Aleksandria
Fiangonana katôlika marônita
Eglizy Katôlika Apôstôlika Rômanina (Madagasikara)
Fiangonana Ôrtôdôksa eto Madagasikara
Fiangonana Pentekotista Mitambatra (Madagasikara)
Fiangonani Jesoa Kristy ho anny Olomasinny Andro Farany eto Madagasikara
I Laurent-Désiré Kabila dia filoham-pirenen’i Repoblika Demôkratikani Kôngô teo anelanelan’ny taona 1997 sy 2001, izay teraka tao Moba ao amin’ny tapany avaratr’i Katanga tamin’ny taona 1939 ary maty tamin’ny 2001. Nanambara ny tenany ho filoham- ...
I Kimpa Vita dia mpaminanivavy kôngô, mpanorina sady nitarika ny fihetsiketsehana ara-pivavahana antônianista, izay fifangaroan ny katôlisisma sy ny fivavahan-drazana tao Kôngô. Teraka tao Mbanza Kongo izy tamin ny taona 1684 ary maty tao Evolulu ...
Ny kafe dia zavamaniry, karazan-kazo, izay volen ny olona mba hahazoana voany hanamboarana zava-pisotro ata hoe kafe ihany koa. Mahatratra 80 ny karazan-kafe ka ny sasany tena hazo avo fa ny sasany indray hazo madinika. Any amin ny faritra manana ...
Fitenin ny tompon-tanin i Aostralia
Ny fiteninny tompon-tanini Aostralia dia vondrom-pianakaviam-piteny maro miampy fiteny manirery maro ao Aostralia sy ny nosy manodidina, afa-tsy i Tasmania. Tsy fantatra mazava ny fifandraisanireo fiteny ireo. Ny ankamaroanny fiteninny tompon-tan ...
Ny fiteny arabo dia fiteny semitika tenenina ao avaratri Afrika sy any Azia Andrefana. Io fiteny io dia anisanny fiteny ofisialinny Firenena Mikambana sy fiteny ofisialy tokanny Liga Arabo. Raha atambatra ny olona miteny arabo eo aminny firenena ...
Reginald Fessenden dia mpahay fizika, mpamorona mizaka ny zom-pireneni Kanada teraka ny 6 Oktobra 1866 tao Québec ary maty ny 22 Jolay 1932 tao Bermioda
Ivan Vazov dia Poeta, mpanoratra tantara lava, mpanao asa soratra, mpanoratra mizaka ny zom-pireneni Bolgaria teraka ny 9 Jolay 1850 ary maty ny 22 Septambra 1921 tao Sofia
Ny fiteny bolgariana dia fiteny ao aminny fianakaviam-piteny indo-eoropeana ao aminny vondrom-piteny slava indrindra ao aminny fiteny slava atsimo, iray aminireo zana-bondrona telo. Mifampitohy aminireo fiteny hafa ao aminio zana-bondrona io ny f ...
Ny Fiangonana ôrtôdôksa tatsinanana na Fiangonana ôrtôdôksa katôlika izay fantatra indrindra aminny anarana fohy hoe Fiangonana ôrtôdôksa dia fiangonana faharoa, raha ny hamaronny mpino ao aminy no jerena. Iray aminireo fiangonana tranainy indrin ...
Ny bôgômilisma dia fihetsiketsehana kristiana tsy nanaraka ny fampianaran ny Fiangonana ofisialy, niforona tamin ny taonjato faha-10, izay efa tsy misy intsony ankehitriny, nanorina ny fampianarany amin ny lamin-kevitra manikeana izay mampifanohi ...
Ny doalisma dia foto-pampianaram-pivavahana izay milaza ny fiaraha-misin ny foto-javatra roa maharitra nipoiran ny tsara sy ny ratsy. Mampifanohitra foto-javatra na andriamanitra roa na antokon andriamanitra na antokom-panahy roa ny fivavahana do ...
Ny fiteny diola dia isanireo fiteny mandinga tenenina na azonny olona miisa 20 tapitrisa ao Malỳ sy ao Kôtidivoara ary ao Borkina Fasô. Fiteny mifanakaiky rafitra aminny fiteny bambara izay tetenina indrindra ao Malỳ ao aminny faritri Bamako sy a ...
Ny fiteny bambara dia iray aminireo fitenim-pirenena ao Maly. Izy no fiteny nibeazanny ankamaroanny mponina ao aminio firenena io sy fiteny be mpitany indrindra. Ao aminny fianakaviam-piteny mande ny fiteny bambara, izay ao aminny vondrom-piteny ...
Kolontsaina ao Borondy
Ny fiteny ôfisialin i Borondy dia ny fiteny kirondy sy ny fiteny frantsay. Latsaky ny 10 %n’ ny mponina no miteny frantsay. Ny fiteny soahily dia fitenim-pampianarana manampy ny fiteny frantsay sy ny fiteny kirondy, na dia tsy isan ny fiteny ôfis ...
Ny fivavahana ao Borondy dia anjakan ny kristianisma. Eo anelanelanny 67 % sy 85 %n’ ny mponina ao Borondy dia Kristiana, fa eo anelanelan ny 7.9 % sy 23 % kosa manaraka ny fivavahan-drazana animista. Ahitana mpino silamo vitsy an’ isa koa ao, iz ...
Fiteny ao Borondy
Ny fiteny ao Borondy dia ahitana ny fiteny kirondy, ny fiteny frantsay, ny fiteny soahily, ny fiteny anglisy ary fiteny maro hafa. Ny fiteny ôfisialin i Borondy dia ny fiteny kirondy sy ny fiteny frantsay. Latsaky ny 10 %n’ ny mponina no miteny f ...
I Louis Rwagasore dia andriandahy, ao amin ny fianakavia-mpanjaka tao Borondy, sy mpitondra fanjakana borondey, izay nisahana ny raharahan ny piraiminisitra volana vitsy talohanny hahazoan i Borondy ny fahaleovan-tena, teraka tao Gitega tamin ny ...
I Nily na Neily dia reniranoni Afrika Atsinanana. Izy no renirano lava indrindra maneran-tany. Miala avy eo aminny Farihy Victoria ao Afrika Afovoany ka mikoriana mianavaratra ny renirao Nily, mamakivaky ani Oganda sy ani Sodàna sy ani Egipta ary ...
Farihy Lehibe (Afrika)
Ny Farihy Lehibe dia farihy maromaro mifampitohy ao Afrika Atsinanana. Ny firenena manamorona ireo farihy ireo no mitambatra ka manome ny atao hoe Afrikan ny Farihy Lehibe, na Faritry ny Farihy Lehibe, dia tsy iza izany fa i Borondy, ny Repoblika ...
Ny Totsy dia vahoaka monina ao amin’ny faritra anelanelan’ny farihy ao Afrika Afovoany, indrindra ao Roanda sy ao Borondy ary ao amin’ny tapany kely amin’i Tanzania. Araka ny famaritanny mpanjana-tany azy ireo, ao aminny Totsy na Batotsy, ny lehi ...
Ny fiteny giha na fiteny kiha dia fiteny banto tenenin ny mponina miisa 990 000 ao amin ny tapany andrefan i Tanzania. Manakaiky dia manakaiky ny fiteny kiniaroanda sy ny fiteny kirondy io fiteny io. Ny Roandey izay nifindra tsy fidiny tany Tanza ...
Faritry ny Farihy Lehibe (Afrika)
Ny Faritry ny Farihy Lehibe na Afrikan ny Farihy Lehibe dia faritra ao Afrika mahafaoka firenena efatra manamorona ireo Farihy Lehibe ao Afrika Atsinanana. Ireto ireo firenena ireo: i Borondy sy ny Repoblika Demôkratikan i Kôngô sy i Oganda ary i ...
Ny taontaonkafa na taotaonkafa na kankafotra dia vorona madinika, iray karazana aminny toloho. Na eto Madagasikara aza no tena ahitana azy dia hita any Afrika Atsimo, any Zambia, any Malaoy, any Borondy, any Roanda, any Oganda, ary any aminny Rep ...
Ny Baniamolenge, amin ny heviny hentitra, dia vondom-poko miteny kiniaroanda niorim-ponenana ao amin ny lemak i Ruzizi ao amin ny Repoblika Demôkratikan i Kôngô tamin ny tonjato faha-19. Ny ankamaroan izy ireo dia monina ao amin ny faritanin i Su ...
Ny Maley na Malay dia ireo vahoaka aostrôneziana ao amin ny morontsiraka atsinanana ao amin ny nosy indônezianan i Somatra, ny nosy Riau, izay indôneziana koa, ao amin ny alanan ny nosy Bôrneô, ao amin ny saikanosin i Malezia, nhy saikanosin i Si ...
Ny fiteny nepaley dia fiteny ao amin ny fianakaviam-piteny indô-iraniana tenenina ao Nepaly, any India ary any Botàna. Izy no fiteny ôfisialin i Nepaly. Ao India dia mihoatra ny 2 000 ny isan ny olona miteny nepaley amin ny maha fitenin-dreny azy ...
I Tibeta dia faritra mizakatena ao Sina. I Lhassa no renivohiny. Ao amin ny tapany andefan i Sina no misy azy, ka mamaritra azy ao avaratra ny faritra mizakatenan i Xinjiang sy ny faritanin i Qinghai, ao atsinanana ny faritanin i Sichuan, ao atsi ...
Ny fiteny goarany dia fiteny amerindiana ao aminny fianakaviam-piteny topy-goarany izay tenenina ao Paragoay maha fiteny ofisialy azy miaraka aminny fiteny espaniola. Tenenina ao aminny tapany avaratri Arjentina, ao aminny tapany andrefani Bolivi ...
Teôlôjian ny fanafahana
Ny teolojian ny fanafahana dia firehana ara-teôlôjia kristiana izay nandray ampahany amin ny fotokevitra marksista avy ao Alemaina izay naondrana mankany Amerika Latina, ary narahin ny fihetsiketsehana ara-piarahamonina sy ara-pôlitika, mikendry ...
Ny batisma dia firehana iray ao aminny fivavahana kristiana isanireo sampana ara-pilazantsara izay notarihina pastora roa taminny taonjato faha-17, dia ilay anglisy atao hoe John Smyth tao Holandy taminny taona 1609, sy i Thomas Helwys tao Anglet ...
Ny fiteny serba na fiteny serbiana dia iray amin ireo karazana fiteny fenitra ampiasain ny Serba ao amin ireo fiteny serbô-krôatiana na serbô-krôaty ao amin ny vondrom-piteny slava. Ireo fiteny ataon ny mpahay teny sasany hoe fiteny serbô-krôaty ...
I Robena na Reobena dia zanaki Jakoba voalohany tamini Lea araka ny fitantaranny Baiboly ao aminny Bokinny Genesisy. I Robena no niangavy ireo rahalahiny mba tsy hamono ani Josefa fa hanipy azy ao aminny lavaka fantsakana. Taminny dianizy ireo ta ...
Ny fiteny beja dia fiteny afro-aziatika teneninny vahoaka mpifindrafindra monina atao hoe Beja ao Sodàna sy ao Eritrea ary ao Ejipta. Isanny fiteny kositika ny fiteny beja ary hany fiteny tokana ao aminny vondrom-piteny kositika avaratra. Endriky ...
Ny fiteny tigrea dia fiteny etiosemitika tenenina ao Eritrea sy ao Sodàna. izay isanny fiteny semitika ao aminny fiteny hamito-semitika.tenenina ao aminny Tandroki Afrika. Atao hoe ትግረ / tigre na ትግሬ / tigrē izy aminny fiteny tigrea. Ny ao Eritre ...
Ny fiteny afara dia fiteny ao aminny vondrom-piteny kositika ao aminny fianakaviam-piteny afro-aziatika. Ao Etiopia sy ao Eritrea ary ao Jiboty no ahitana mpiteny afara, izay mitotaly eo anelanelanny 1.4 sy 1.8 tapitrisa. Manakaiky ny fiteny sahô ...
Fiangonana ortodoksa teoahedo
Ny Fiangonana ortodoksa teoahedo dia isanny Fiangonana ortodoksa tatsinanana sady ao aminny Fiombonanny Fiagonana Ortodoksa Tatsinanana. Izy no fiangonana ortodoksa miely indrindra ao Etiopia sy ao Eritrea. Hatraminny nisiany ka hatraminny taona ...
Fiangonana ortodoksa teoahedo eritreana
Ny Fiangonana ortodoksa teoahedo eritreana dia fiangonana antekalkedoniana mahaleotena. Miombona ao aminny Fiangonanny konsily telo izy. Ny filohanny fiangonana dia mitondra ny anaram-boninahitra hoe Patriarkani Eritrea sady manana ny trano fonen ...
Ny fiteny etiosemitika na fiteny afrosemitika na fiteny etiopika dia fianakaviam-piteny tenenina indrindra ao Etiopia sy ao Eritrea. Izy ireo sy ny ireo fiteny arabo atsimo taloha sy ankehitriny no mamorona ny sampana atsimonny fianakaviam-piteny ...
Ny fiteny semitika andrefana dia sampan ny fiteny semitika hita amin ny tapany andrefan ny faritr i Azia Andrefana. Ireto avy ireo fiteny semitika andrefana: ny fiteny amôrita, ny fiteny ogaritika, ireo fiteny tao Kanaana, ny fiteny arameana, ny ...
Ny mpanjakavavini Saba na mpajakavavini Seba dia mpanjakavavy resahina ao aminny Baiboly izay fantatra araka io boky io fa nanapaka ny Fanjakani Saba. Nitsidika ani Solomona na Salômôna tao Jerosalema izy raha nahare ny lazanny fahendrenity mpanj ...
Ny Valantsa dia tanàna any Espaina, any antsinanana ao espaina, voaforoni Junius Brutus Callaicus ny tanànanny Valentsa taminny 138 AJK ny anarany taminio fotoana io dia Valentia Edetanorum, ny renirano Turia no miampita ny tanàna.
Ny fiteny espaniôla, na koa fiteny kastilianina, dia fiteny iray ao Eoropa. Io fiteny io dia ao amin’ny vondrona rômana, ao aminny fianakaviam-piteny indô-eorôpeanina. Miaraka amin’ny fiteny frantsay sy italianina ary pôrtogey, io fiteny io no an ...
Ny Empirani Aksoma na Fanjakani Aksoma dia fanjakana natanjaka tao aminny Tandroki Afrika ao avaratri Etiôpia sy Jiboty ary Eritrea. Nandroso manodidina ny natanànani Aksoma izany fanjakana izany nanomboka taminny taonjato faha-4 ka nahatratra ny ...
Ny Nilôtika dia vahoaka teratany ao amin ny lohasahan ony Nily izay miteny amin ny fiteny nilôtika, zana-bondron ny fiteny nilô-sahariana tenenin ny olona ao amin ny tapany atsimon i Sodàna sy ao Kenia ary ao amin ny farira avaratr i Tanzania. Ny ...
Ny Fiangonana ôrtôdôksa Siriaka na Patriarkata ôrtôdôksa siriakani Antiôkia sy ny Atsinanana manontolo dia isanny Fiangonana ôrtôdôksa tatsinanana Fiangonanny Kônsily telo izay manana ny renivohiny ao Antiôkia.
Ny teny hoe ôrtôdôksa dia ampiasaina hanondroana fireham-pivavahana heverin ny mpomba azy fa manaraka ny tena izy. Ao amin ny fivavahana kristiana dia anisan ireo fiangonana tatsinanana ny fiangonana ôrtôdôksa izay misampana maro. Ao amin ny fiva ...
Ny ampemba dia zavamaniry toy ny katsaka maniry amin’ ny faritra manana toetanim-pehin-tany na toetany mediteraneana. Ampiasaina indrindra ho hanin’ ny biby fiompy ny ampemba. Ny karazany sasany dia volena koa mba hohanin’ ny olona. Atao hoe Sorg ...
Ny Brexit na ny Fivoahanny Fanjakana Mitambatra aminny Vondrona Eoropeanina dia hetsika mampiroborobo ny fivoahanny Fanjakana Mitambatra aminny Vondrona Eoropeanina vokatry ny fitsapa-kevi-bahoaka natao taminny taona 2016. Taminizany fitsapa-kevi ...
Emirata Arabo Mitambatra
Ny Emirata Arabo Mitambatra dia Fanjakana federaly niforona taminny taona 1971, izay hita ao Atsinanana-Afovoany eo anelanelanny Helodrano Persika sy ny Helodranoni Omàna. Izao avy ireo emirata miisa fito mamorona azy: Abo Daby, Ajmàna, Sarjaha, ...
Edward William Barton-Wright dia injeniera sivily, injeniera mizaka ny zom-pireneni Fanjakana Mitambatra teraka ny 8 Novambra 1860 tao Bangalore ary maty ny 26 Aprily 1951 tao Fanjakana Mitambatra
Fanafihana taminny 13 Novambra 2015 t ..
Vanimpotoana hindo sy bodista tao Ind ..
Eglizy Katôlika Apôstôlika Rômanina ( ..
Fiangonana Pentekotista Mitambatra (M ..
Fiangonani Jesoa Kristy ho anny Oloma ..